आजको सदर्भमा भारतीय सेनामा नेपालीहरूको सहभागितको सान्दर्भिकता के छ ?
गोर्खा भर्ती सुरु हुने बेलामा र आजसम्ममा यसको महत्वमा खासै धेरै फरक परेको छैन । यति हो कि पहिलाको तुलनामा आज भर्ती हुन आउनेहरू धेरै पढेलेखेका छन् । पहिलाको तुलनामा त्यति स्वस्थ छैनन् । कुनै समय पढ्ने लेख्ने चिन्ता थिएन के मात्रै चिन्ता थियो भने डोकामा कति भारी बोक्ने र अगाडिबाट गोली आयो भने पनि ‘कासन’ पायो भने हमला गर्ने हो । आज भिन्न छ, तर बहादुरीमा कमी छैन । सेनामा जागिर खानु भनेको सम्मान पाउनु हो तर आजका तन्नेरीहरूलाई अन्तिममा पैसा महत्वपूर्ण भएको छ । नेपाल–भारत सम्बन्धलाई निकै घनिष्ट रूपले बाध्ने कडी भनेको सेना–सेना बीचको सम्बन्ध नै हो । नेपाली सेना प्रमुख र भारतीय सेना प्रमुख एकअर्काको सेनाका अनररी जनरल बन्दछन् ।
नेपाली गोर्खा सैनिकको सन्दर्भमा कुरा गरिएको होइन ।
होइन, म भारतीयहरूको कुरा गरिरहेको छु । भारतमा जुन नेपाली रहने गर्दछन् ती भारतीय हुन् । एउटा गोर्खा बटालियनमा ६० प्रतिशत नेपालबाट र ४० प्रतिशत भारतबाट भर्र्ती हुने गर्छन् । यी भनेका ‘इन्डियन डोमिसाइल्ड’ नेपाली हुन् । उनीहरू अफगानिस्तानमा सेक्युरिटी गार्डमाको काम गरिरहेका छन् । यदि भोलि कुनै देशले सेनामा भर्ती लिने भयो भने र त्यसमा कुनै भारतीय गयो भने त्यो खुला छ । कुनै सेनाले भारतीयहरूलाई बोलायो भने भारतले किन रोक्ने ? आखिर अहिले भारतबाट मुसलवानहरू आईएसमा पनि त गइरहेका छन् । उनीहरूलाई रोकिँदैछ किन भने त्यो गलत काम हो ।
पोखरामा पेन्सन क्याम्पको नाममा कर्णेलको नेतृत्वमा ६० देखि ७० जनाको टुकडी रहने गर्छ भने यस्तै काठमाडौं, धरान, बुटलवल लगायतका तपाईंले भनेको ती २६ ठाउँमा ती सेनाले वर्षभरि पेन्सन मात्र बाँडेर बस्छन् ? अन्य काम पनि गर्दा होलान् नि ?
यो त २४ वाई ७ को कुरा हो । प्रत्येक बिहान ९ बजेदेखि कार्यक्रम सुरु भइहाल्छ र मान्छेहरू राति ९ बजेसम्म त्यही हुन्छन् । पहिला कम्प्युटराइज थिएन आज सबै सिस्टम कम्प्युटराइज भएको छ, पेन्सन एक दिनभित्रै पाऊन् भन्ने नीति छ । तपाईंले जता सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको सम्भावना छैन । त्यसका लागि अर्को जागिर हुने गर्छ ।